Iipleyiti zokuTyibilika okukhuselekileyo zokukhusela iicrafti zeFektri china abavelisi, abaxhasi
I-1060 Aluminium Plate iyathengiswa / iphepha lesipili lealuminium
Iphepha lesipili seAluminiyam libhekisa kwipleyiti encinci yealuminium eyenziwe ziinkqubo ezahlukeneyo njengokuqengqeleka kunye nokucoca. Ukubonakalisa ukukhanya ngokukuko, kukwabizwa ngokuba liphepha elibonakalisayo. Umaleko omncinci okhuselayo uhlala usetyenziselwa ukugubungela umphezulu wawo. Imibala eqhelekileyo ibandakanya oluhlaza okwesibhakabhaka, isilivere, tyheli kunye noluhlaza.
Iphepha le-aluminium ye-1100
Kusekho iimpawu ezizodwa ngakumbi kunye neepropati zoluhlu lwealuminium alloy. Ngenxa yokuba le propati yodidi lokuqala lwealuminium esekwe kwi-alloys, ipleyiti yealuminium ngoku sele isetyenziswa ngakumbi kuluntu lwanamhlanje. Ke, ukuba ungayikhetha njani eyona ipleyiti yealuminium ifanelekileyo kwishishini lakho kwaye lingakanani iphepha lealuminium zonke iingxaki ekufuneka zilungisiwe ngokukhawuleza.
I-Anti Slip Checker Plate Stair yeNyathelo
Iipleyiti zokunyathela i-anti-Slip yoKhuseleko kwi-aluminium zenziwe ngesiko kwaye zinokuveliswa zilungele naluphi na uhlobo lwendawo olunokutyibilika, lube yingozi kwaye lube yingozi okt intsimbi / igrille, ipleyiti ebotshiweyo, ipleyiti yealuminiyam, ikhonkrithi, amaplanga.
Ishidi leAluminiyam yoShishino
IAluminiyam kunye nealuminium ngokuthe ngcembe ziba ngamalungu awomeleleyo kwimizi-mveliso eyahlukeneyo ngoku. Okwangoku, iimveliso ezikumgangatho ophezulu zeealloys eziqhelekileyo ze-aluminium ngoku zidlala indima ebalulekileyo kubomi bethu.
Ingxubevange: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754,5083,5086, 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Ubushushu: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Umphezulu: Ekhanyayo / Mill / Emboss / Diamond / 2bar / 3bars / 5 imivalo / Anodized
Ubukhulu: 0.2mm ukuya 300mm
Ububanzi: 30mm ukuya 2300mm
Ubude: 1000mm ukuya 10000mm.
Singasika ukuya kubude / ububanzi
Umthombo wexabiso eliphantsi ongatyibilikiyo I-Brite aluminium ingxubevange inyathela iipateni zokujonga ipleyiti
I-RuiYi Aluminium Njengomnye wabenzi beplate yokuhombisa ialuminium kunye nabathengisi banokubonelela ngazo zonke iintlobo zesitya sokutshekisha, ezinje ngeplate yedayimani, ipleyiti yokunyathela, inyathelo lokunganyatheli ukunyathela kunye nepleyiti yokujonga ipleyiti
Iimakhishithi zeAluminiyam zisetyenziselwa ukwakha iintlobo zeemveliso eziyimfuneko kushishino lwezithuthi, kwezomatshini, kwiaerospace nakwimizi-mveliso yolwandle. Umzekelo, amashiti ealuminium asetyenziselwa ukwenza ukubekwa emacaleni kunye nophahla lwezindlu kunye neepaneli zomzimba zeemoto, iinqwelomoya neenqanawa. Ngenxa yokuba amashiti e-aluminium alula kwaye ayamelana nomhlwa kunye nomhlwa, kulula ukuzifaka kwaye ziyimeko yemozulu. Baphinde bathathe umothuko kakuhle, into ebalulekileyo kwezokhuseleko kwiimoto ngokukodwa.